"Ma rabin in ay isticmaalaan Lugood si loo soo celiyo aan iPhone", ama "Lugood ma soo celin karo iPhone"
Mararka qaarkood, retoring iPhone in goobaha ay asal ah waa hab fiican u dhib. Laakiin waxa jira sababo iyo goorba kala duwan ee aad la joojiyo isticmaalka Lugood in la soo celiyo aad iPhone si guul leh sida aad computer ma aha ee gacanta wakhtigaas, fariin qalad ah ka Lugood hesho sida "Lugood ma soo celin karo iPhone sababtoo ah iPhone ay diideen codsiga", ama waxaad kaliya aan helay Lugood rakibay oo aadan rabin in loo isticmaalo. Kuwaaga No arrinta iska leh kaas oo, run ahaantii aanad u baahan tahay si aad u niyad by this. Iyo goorba Waxaa jirta waddo inay idinka socon.
Soo Celinta iPhone in Settings Factory aan Lugood
Haddii aad leedahay xisaab iCloud ah, aad si fudud u soo celin kartaa iPhone ka iCloud aan la isticmaalayo Lugood iyo computer ah. Waxay kaa caawin karaan inaad si toos ah u samayn on your iPhone. Inta aanad samayn, hubi in aad xoojiyaa aad u muhiim ah oo ku saabsan iPhone.
Resetting aad iPhone: Tag Settings> General> celi> masixi All Content iyo Settings.
Soo celinta aad iPhone aan Lugood, bilow ilaa aad iPhone, oo waxaa laguu keenay in doonaa in ay isticmaalaan Kaaliyaha Setup ah. Iska aad iPhone xiran Wi-Fi. Markaas dooran "Soo Celinta ka iCloud Back".
Ka kaabta Soo Celinta iPhone aan Lugood
Haddii aan Lugood, ma jirto si ay u soo celiyaan Lugood gurmad si iPhone ah, sababtoo ah waa habka kaliya ee Apple kuu ogolaanaysaa inaad samayn la gurmad Lugood faylka. Markaas ha ee ka fiirsan qof kale, sida Wondershare, oo Dr.Fone ee macruufka (iPhone Data Recovery) wuxuu kuu ogolaanayaa inaad Macdan gurmad Lugood u eegis iyo dib u soo kabashada.
Macruufka xogta qalab software adduunka ayaa soo kabashada koowaad ee dadka si ay u soo kabsadaan xogta ka iPhone, iPad, iPod taabto, gurmad Lugood iyo iCloud files gurmad.
Si toos ah iskaan iPhone, iPad iyo iPod xiriiri inuu ka soo kabsado xogta la tirtiro.
Waraaqda Lugood iyo iCloud files gurmad in ay ku eegaan iyo eegista soo kabsado wax kasta oo aad rabto.
Kabsado noocyada file ilaa 18 nooc oo sida xiriirada, sawiro, fariimaha, videos, iyo in ka badan.
Shuqulkii weynaa ee macruufka 9 oo dhan iPhone, iPad iyo iPod taaban 5/4.
Talaabooyinka soo celinta iPhone aan Lugood kaga imaanayo
1. Orod barnaamijka on your computer iyo dooran "kabsado Lugood ee kaabta File".
2. Waxaad arki kartaa oo dhan Lugood files gurmad on your computer waxaa. Dooro mid aad rabto in la soo celiyo oo guji "Start Scan" si aad u hesho waxa ay soo bixiyay.
3. Ka dib markii in, aad ku eegaan kartaa dhammaan xogta laga soo gurmad ah. Sax shayga aad rabto iyo badbaadin on your computer.
Wondershare Dr.Fone Ee macruufka sidoo kale ha idinka gurmad iCloud soo celin iPhone. Haddii aad u baahan tahay, waxaad u isticmaali kartaa si toos ah kala soo bixi iyo Macdan aad online gurmad iCloud, iyo soo kabsado iyaga eegista sida aad rabto. Waxa aad tilmaan-faahfaahsan ka akhrisan kartaa halkan: sida loo soo celin iPhone kaga imaanayo iCloud .
> Resource > Lugood > Sidee soo celinta iPhone aan Lugood